K: တူ/တံစဉ် လူထု နဲ့ တန်ဖိုးနည်းဒီမုိုကရေစီ
တူ/တံစဉ် လူထု နဲ့ တန်ဖိုးနည်းဒီမုိုကရေစီ
ခင်ဗျားတို့ကို စေတနာလည်း မရှိတော့ဘူး.. တဲ့။ ဒီလကုန်မှာ အပြီးရွှေ့ရမယ်...တဲ့။ အေး..မပြောင်းနိုင်ဘူး..တရားရင်ဆိုင်မယ် ဆိုရင်လည်း..ခင်ဗျားတို့ မိသားစုရှေ့ရေးတွေ မေ့သာ ထားလိုက်တော့..တဲ့။
Weekly Eleven, Vol.8 No.38 , July 01 2013
ကေ့နှယ် ပြောတတ်ပလေ.. တန်ဖိုးနည်း ဒီမိုကရေစီ ဟုတ်လား..
ဆိုရှယ်လစ်တုန်းကလဲ .. ကမ္ဘာပေါ်မရှိဖူးတဲ့ မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ်.
ခုတော့ မြန်မာ့နည်း မြန်မာ့ဟန်..ဒီမိုကရေစီ..
မနက်က သမ္မတ မိန့်ခွန်းမှာတော့ ILO နဲ့လက်မှတ်ထိုးနိုင်ခဲ့ပြီ ဖြစ်လို့ အလုပ်သမား အခွင့်အရေးတွေ ရပိုင်ခွင့်တွေ အတွက် ပိုမို ပွင့်လင်းစွာ ထိရောက်စွာ လုပ်ပေးနိုင်မယ် ဆိုပဲ.. Wish for no just on paper! :(
ရှယ်ပါ မမ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။း)
နှစ်ပေါင်းမြောက်များစွာ တစ်သွေ တစ်မိန့် ဆိုပြီး အာဏာရှင်စစ်အစိုးရအုပ်ချုပ်လာခဲ့တဲ့နိုင်ငံမှာ ပြန်ပြီး ဒီမိုကရေစီ ဆိုပြီး ဖွင့်ပေးလိုက်တဲ့အခါ
မှာ တစ်ခါတည်း လူတွေရဲ့ မွန်းကြပ်မှုတွေက အလုံပိတ်ထားတဲ့တိုက်တစ်ခုကို လေ၀င်ပေါက်တစ်ပေါက်ကလေးဖွင့်ပေးလိုက်တာနဲ့ 
အထဲက လူတွေက တစ်ပြုံကြီးစုပြီး အသက်ပြေးရှုကြသလိုပဲ ဒီလိုပြဿနာတွေက အစပိုင်းမှာရှိနေပြီး ဘာလုပ်လို့ ဘာကိုင်မရ ဖြစ်နေကြအုန်းမှာပါပဲ။